Fametrahana Photovoltaic: inona izy ireo ary ahoana no fomba hanararaotana azy ireo | Fanavaozana maintso
Hatramin'ny hetra amin'ny masoandro, lalàna iray napetraka tamin'ny 2015 ary nametraka sakana marobe hahafahana mampiasa fahaleovan-tena angovo avy amin'ny masoandro any amin'ny trano sy orinasa tsy miankina, tsy misy intsony, azontsika atao ny mampiasa ny fanjifana tena amin'ny angovo. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy fantatsika izay rehetra mifandraika amin'ny fametrahana fotovoltaika. Hanokana ity lahatsoratra ity izahay hanazava izay rehetra tokony ho fantatrao mba hankafizanao ny anao fametrahana photovoltaic na amin'ny sehatra tsy miankina na orinasa.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fametrahana photovoltaic ianao dia ity ny lahatsoranao.
1 Paradigma an'ny fametrahana photovoltaic
2 Fampiasam-bola sy tahiry
2.1 Ny fandaniana amin'ny fikojakojana
3 Fametrahana fotovoltaika isam-batan'olona
3.1 Fahaleovantena angovo
Paradigma an'ny fametrahana photovoltaic
Noho ny fanafoanana ny hetra amin'ny masoandro dia tsy ilaina intsony ny fametrahana photovoltaic fametrahana manana herinaratra latsaky ny 100 kW. Ho fanampin'izany, noho ireo politika izay manatsara ny tetezamita ekolojika, trano maromaro no afaka mahazo tombony amin'ny fotoana mitovy amin'ny fanjifana tena. Nanjary zavatra mety izany isaky ny miorina amin'ny trano fonenan'ny takelaka misy ny 65% ​​-n'ny mponina ao amin'ny firenena matetika.
Ireo izay te-hiloka amin'ny fametrahana ireo takelaka Solar ao an-trano ary afaka hitantana ny herinaratra ho azy ireo dia tsy handoa vola amin'ny governemanta. Ity lalàna ity dia nanao izay hanamaivana ireo fomba fitantanana izay ilaina mba hahafahana mankafy ny fanjifana tena amin'ny herinaratra. Ny ankamaroan'ny sakana nomen'ny hetra masoandro dia ny fepetra takian'ireo fepetra voalaza ireo. Ho fanampin'izay, ampiana ireo rehetra ireo ny fihenan'ny vidin'ny tontolon'ny masoandro izay midika fa trano sy orinasa maro no manapa-kevitra ny hiloka amin'ity angovo madio ity.
Fampiasam-bola sy tahiry
Raha vantany vao nandinika an'ity paradigma ity isika dia manana safidy roa: amin'ny lafiny iray dia afaka manakarama ny serivisy ananan'ny orinasa manampahaizana manokana amin'ny fametrahana fitaovana fanangonana angovo masoandro, fitahirizana ary fizarana izahay. Etsy ankilany, isika irery dia afaka manao azy fa miankina amin'ny teti-bola ananantsika amin'ity fampiasam-bola ity.
Raha te hanana hevitra dia raisinay ho toy ny referansa trano tokana misy fianakaviana iray izay eo afovoan'i Espana. Ny totalin'ny vidin'ny fametrahana photovoltaic dia mety miovaova eo anelanelan'ny 9.000 sy 11.000 Euros. Ny salanisan'ny fanjifana isan-tokantrano dia manodidina ny 3.487 kWh isan-taona, izay mitovy amin'ny 9.553 Wh isan'andro, izay mitondra famoahana isan-taona manodidina ny 520 euro, satria ny vidiny isaky ny kWh dia 0,15 euro.
Raha raisina ireo kajy sy isa rehetra ireo dia afaka manatsoaka hevitra isika fa mila 18 taona eo ho eo vao afaka manonitra ny fampiasam-bola natao. Amin'izay fotoana izay no hanaovantsika 100% amin'ny fanjifana herinaratra. Matetika manodidina ny 25 taona ny fiainana mahasoa an'ny takelaka amin'ny masoandro, ka 3.600 euro ny totaliny azo voatahiry.
Ny fandaniana amin'ny fikojakojana
Amin'ireo fampanjariam-bola rehetra dia mila ampiana ny fandaniana fanampiny izay mety hitranga satria ilaina izany, indraindray, mila ampifanarahintsika ny tafontrano mba hahafahan'ny fametrahana fotovoltaika mifanaraka tsara. Raha ilaina dia misy karazana fanavaozana na fampifanarahana tsy maintsy atao amin'ny fizarana sy fitehirizana angovo. Ny iray amin'ireo tombony omen'ny fametrahana fotovoltaika dia ny ahafahantsika mampiasa fanampiana na fanampiana kely, na avy amin'ny filankevitra amin'ny tanàna na amin'ny filankevitra, mba hampihenana ny vidin'ny fampiasam-bola. Ireo entam-bahoaka ireo dia mamporisika hatrany ny olom-pirenena rehetra hiditra sy hiloka amin'ny angovo azo havaozina.
Ny takelaka amin'ny masoandro dia mitaky fikolokoloana ary misy orinasa maro natokana ho azy. Ny orinasam-pananganana sasantsasany dia natokana hampidirina ao anaty fonosana ny fikojakojana manokana ny toerana misy azy ireo. Ohatra, tsy maintsy fantarintsika ny fomba sy ny fotoana hanaovana ny fanadiovana ny takelaka ho an'ny asany marina, ankoatry ny hafa. Ilaina ireo lafin-javatra ireo rehefa manombatombana na misafidy ny fanjifana tena angovo isika na mijanona hifandray amin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra.
Fametrahana fotovoltaika isam-batan'olona
Raha te-hanao irery ny fametrahana fotovoltaika ao an-tranontsika isika dia tsy maintsy fantarintsika aloha ny karazana tontonana masoandro izay hapetraka. Misy karazan-takelaka amin'ny masoandro isan-karazany misy toetra, fahombiazana ary vidiny isan-karazany. Tsy maintsy misafidy ireo takelaka Solar izay mifanentana indrindra amin'ny filantsika sy ny teti-bolantsika isika. Misy karazany telo lehibe amin'ny tontolon'ny masoandro: panovan'ny masoandro photovoltaic, panneaux solar ary panneaux hybrid.
Ny takelaka solar photovoltaic no roa matetika indrindra ary matetika no ampiasaina ho an'ity karazana fametrahana photovoltaic ity. Ity karazana takelaka ity dia manana toetra mampiavaka azy ary izany dia ny asany no tompon'andraikitra amin'ny fakana ny angovo avy any amin'ny masoandro hanovana azy ho lasa tsimbadika hafa. Matetika izy io dia manana herinaratra sy fahombiazana sahaza ho an'ny fampandehanana tsara ny fitaovana rehetra izay matetika ananantsika ao an-tranontsika. Ireo takelaka ireo dia tsy afaka mandeha irery fa mitaky a inverter hery. Ho fanampin'izay, mila batterie fitehirizana ianao mba hamonjy ny angovo ampiasaina.
Mba hahazoana fahaleovan-tena tanteraka amin'ny angovo tsy ho tafasaraka amin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra dia mila bateria ary hivarotra ny angovo ambiny. Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny angovo novokarin'ny panneaux solaires, dia tsy maintsy manana bateria isika izay hampiasa ny herinaratra rehetra izay tsy lanintsika amin'izany fotoana izany na hoe te-hampiasa azy io amin'ny tanjona manokana isika voatahiry. Raiso toy ny bateria fiara mandeha amin'ny herinaratra io karazana bateria io.
Tsy vitan'ny mila mitahiry ny angovo tsy ampiasantsika isika na te-hihary mandritra ny fotoana fohy, fa tsy maintsy mieritreritra izay hatao amin'ny herinaratra vokarina be loatra koa. Io angovo be loatra io dia mety hahatonga antsika hahazo vola raha manao izany. Misy orinasa sasany toa an'i Holaluz izay hanoro hevitra ary hamakafaka mihitsy aza ny fametrahana photovoltaic ary mividiana angovo izay tsy ampiasaina afaka manompo ny sisa amin'ny mpanjifanao.
Araka ny hitanao, ny fametrahana photovoltaic dia lasa tetikasa mety kokoa ary tianay ny hampitombo ny tahiry angovo na ho an'ny paosinay ary hampihena ny fiantraikan'ny angovo tsy azo havaozina amin'ny tontolo iainana. Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fametrahana photovoltaic ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Fametrahana Photovoltaic
Andro eto an-tany
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fitoeram-bokatra compost